Ungayidlulisa Kanjani Indawo Yakho Ye-WordPress ku-New Domain | Martech Zone
Uma usebenzisa isayithi lakho le-WordPress kumphathi oyedwa futhi udinga ukulihambisa komunye, akulula njengoba ungacabanga. Zonke izikhathi zeWordPress zinezinto ezi-4… ingqalasizinda kanye Ikheli le-IP isingathwe ku, the Idatha ye-MySQL equkethe okuqukethwe kwakho, okulayishiwe amafayela, izingqikithi nama-plugins, Futhi WordPress uqobo.
I-WordPress inendlela yokungenisa nokuthekelisa, kepha ikhawulelwe kokuqukethwe uqobo. Akugcini ubuqotho bombhali, futhi ayigudluli izinketho zakho - ezisenhliziyweni yanoma ikuphi ukufakwa. Indaba emfushane… kubuhlungu kwangempela!
Ukusetshenziswa BlogVault, Ngilayishe i-plugin kusayithi lami lomthombo, ngangeza ikheli lami le-imeyili lezaziso, ngabe sengifaka i-URL yami entsha nemininingwane ye-FTP. Ngichofoze ukuthuthela… futhi ngemuva kwemizuzu embalwa ngibe ne-imeyili ebhokisini lami lokungenayo ukuthi isayithi lithuthisiwe.
Akudingeki ngenze lutho… zonke izinketho, abasebenzisi, amafayela, njll. Zithuthelwe kahle zaya kwiseva entsha! Ngaphandle kwethuluzi labo lokufuduka elimangalisayo, iBlogVault iyisevisi yokusekelayo ephelele enikezela nangezinye izici:
Hlola ukubuyiselwa - Ingabe ufuna ukubuyela emuva kunguqulo yangaphambilini yesayithi lakho? Kepha wazi kanjani ukuthi ngabe ilungile ngempela yini leyo? I-BlogVault ikuvumela ukuthi ulayishe inguqulo eyisipele ekhethiwe kunoma iyiphi i-server yabo yokuhlola futhi ungayibona isebenza njengewebhusayithi yangempela.
Buyisela ngokuzenzakalela - Akunandaba ukuthi ngabe iwebhusayithi yakho yonakalisiwe, noma iphutha lomuntu liholele ekwehlulekeni, iBlogVault izohlala iseduze kwakho ukukuvuselela ngokushesha. Isici sokubuyisela ngokuzenzakalela sibuyisela ngokuzenzakalela isipele kuseva ngehora lakho lokudinga, ngaphandle kwesidingo sokungenelela mathupha.
Security - I-BlogVault iqinisekisa ukuphepha okungu-100% ngokugcina amakhophi amaningi wesipele sakho endaweni ezimele kuwebhusayithi yakho. Isipele sakho, esibethelwe, sigcinwa kuzikhungo zemininingwane eziphephile nakumaseva we-Amazon S3. Ngokungafani nokusetshenziswa okujwayelekile kwe-Amazon S3, azigcini izifakazelo njengengxenye yesayithi, ngaleyo ndlela zinciphisa noma yimaphi ama-hacks angahle abe khona.
Umlando - I-BlogVault igcina umlando wezinsuku ezingama-30 wezipele zakho ukuze ukwazi ukubuyela kunoma iyiphi yazo nganoma isiphi isikhathi.
izipele - I-BlogVault yamukela indlela yokwengeza yokwenza inqubo yokulondoloza, ukubuyisela kanye nokufuduka. Akunandaba noma ngabe iBlogVault iyafuduka, yenza isipele, noma ibuyisela isayithi, basebenza kuphela nokushintshiwe kusukela ekuvumelanisweni kokugcina. Lokhu konga isikhathi nobubanzi bomkhawulokudonsa.
Ukudalulwa: Singabanxusa be- BlogVault.
Tags: blogvaultindlelaungadlulisela kanjani i-wordpress kusizinda esishakanjani i-wordpresshambisa i-WordPresshambisa i-wordpressdlulisa i-wordpressWordPress
Izifundo Eziyizibonelo Zokumaketha: Singathembeka Yini?